भजनसंग्रह 49 ERV-NE - प्रमुख - Bible Gateway
भजनसंग्रह 48भजनसंग्रह 50
भजनसंग्रह 49 Nepali Bible: Easy-to-Read Version (ERV-NE)
प्रमुख संगीतकारलाई: कोरह परिवारहरूको भजन।
1 तिमीहरू सबै जाति-जातिहरू यसलाई ध्यान दिएर सुन।
पृथ्वीमा भएका सबै मानिसहरू यसलाई ध्यान दिएर सुन।
2 प्रत्येक मानिस, धनी-गरीब सबैले बराबर ध्यान दिएर सुन्नु नै पर्छ।
3 म तिमीहरूलाई ज्ञान र बुद्धिका कुराहरू भन्ने छु।
मेरो विचारले तिमीहरूलाई बुझ्न सहायता गर्नेछ।
4 मैले स्वयंले ती कथाहरू सुनें
अनि अब मेरो वीणासँग गाउने छु अनि त्यो संदेश तपाईंलाई प्रकट गर्ने छु।
5 कष्ट आउँछ भनेर म किन डराउनु?
यदि दुष्ट-मानिसहरूले वरिपरि घेरेर मलाई पासोमा पार्ने कोशिश गर्छन् भने पनि म डराउने आवश्यकता छैन।
6 कतिपय मानिसहरू सोच्छन् कि तिनीहरूको बल र धनले तिनीहरूलाई रक्षा गर्नेछ।
तर ती मानिसहरू मूर्खहरू हुन्।
7 कुनै तिम्रो मानव मित्रले तिमीलाई बचाउन सक्तैन,
अनि तिमीले परमेश्वरलाई घूस[a] दिन सक्तैनौ।
8 कुनै मानिससँग त्यस्तो प्रशस्त धन हुनेछैन
जसद्वारा उसले आफ्नो जीवन किन्न सकोस्।
9 कुनै मानिसँग त्यस्तो प्रशस्त धन हुनेछैन
जसद्वारा उसले अनन्त बाँच्ने अधिकार किन्न सकोस्,
अनि आफ्नो जीवन चिहानमा सड्न देखि बचाउन सकोस्।
10 हेर, ज्ञानी पुरूषहरू पनि त्यसरी नै मर्छन् जसरी मूर्खहरू र अट्टेरी[b] मर्छन्।
तिनीहरू मर्छन् र आफ्ना धन-सम्पत्तिहरू अरूहरूलाई छोडेर जान्छन्।
11 चिहाननै तिनीहरूको निम्ति सदा-सर्वदा आफ्नो घर हुनेछ।
तिनीहरू जत्तिनै जग्गा-जमीनका मालिक हुन् त्यसले कुनै फरक पर्दैन!
12 मानिसहरू सम्पन्न हुन सक्लान, तर तिनीहरू यहाँ सधैँका लागि बाँच्न सक्तैनन्।
तिनीहरू पशुहरू जस्तै मरेर जानेछन्।
13 ती मूर्खहरूसँग त्यही घटना हुनेछ
जो आफ्ना सम्पत्तिसँग खुशी हुन्छन्।
14 ती मानिसहरू खाली भेंडा जस्तै हुन्।
चिहान नै तिनीहरूको खोर हो।
मृत्यु तिनीहरूको गोठाला हुनेछन।
त्यस पश्चात् त्यो बिहान धार्मिक मानिसहरू नै विजेता हुनेछन्।
जति बेला ती धर्मी मानिसहरूका शरिरहरूत विस्तारै चिहानमा सड्दछ तिनीहरू आफ्ना सुन्दर-सुन्दर घरहरूदेखि टाढा हुन्छन।
15 तर परमेश्वरले मूल्य तिर्नु हुनेछ अनि मेरो जीवन बचाउनु हुनेछ,
उहाँले मलाई पातालको शक्तिबाट बचाउनु हुनेछ जब उहाँले मलाई आफूसितै लैजानु हुने छ!
16 तिनीहरू धनी छन् भनेर मानिसहरूसित नडराऊ।
तिनीहरूका सुन्दर घरहरू छन् भनी नडराऊ।
17 ती मानिसहरू मरेर गएपछि आफूसँग केही पनि लाँदैनन्।
तिनीहरूले ती कुनै पनि सुन्दर चीजहरू लगेर जाने होइनन्।
18 एकजना धनी मानिसले आफ्नो जीवनमा कति राम्रो काम गरें भनेर आफूलाई नै बधाइ दिन सक्छ।
अनि हो, अरू मानिसहरूले पनि उसले राम्रो काम गर्यो भनेर उसको प्रशंसा गर्न सक्छन्।
19 तर उसको मरणको समय आउनेछ अनि आफ्नो पिता-पुर्खाहरूकहाँ जान्छ,
अनि उसले कहिल्यै पनि दिनको उज्यालो देख्ने छैन।
20 मानिसहरू सम्पन्न हुन सक्लान अनि अझै बुझ्दैनन्
तिनीहरू पशुहरू जस्तै मर्ने छन्।
49:7 घूस यहाँ परमप्रभुलाई चढाउने भेटी वा बलि हो जसद्वारा दोषीलाई उहाँले क्षमा गर्नु हुनेछ।
49:10 अट्टेरी अथवा “फटाह मानिसहरू” अथवा “पशुहरू।”